Imisebenzi yeStati yeStatisti kwi-Excel
CHISQ.DIST, CHISQ.DIST.RT, CHISQ.INV, CHISQ.INV.RT, CHIDIST kunye ne-CHIINV Imisebenzi
Izibalo ziyihloko kunye nenani lezinto ezinokwenzeka zokunikezelwa kunye namafomula. Ngokomlando ezininzi izibalo ezibandakanya ezi fomula zazinzima kakhulu. Iifayile zexabiso zaveliswa kwezinye zezibonelelo ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwaye ezininzi iincwadi zezifundo zisashicilela iingcaphuno zala macwecwe kwizihlomelo. Nangona kubalulekile ukuqonda isakhelo esilungileyo esisebenza emva kweemboniselo zetafile ezithile, iziphumo ezikhawulezayo nezichanekileyo zifuna ukusetyenziswa kweefowuni zesalathisi.
Kukho inani lamaphakheji wesofthiwe. Omnye oqhelekileyo usetyenziselwa ukubala kwi-intro is Microsoft Excel. Uninzi lwabelo luye lwacwangciswa kwi-Excel. Esinye salezi zi-distribution ze-square. Kukho imisebenzi emininzi ye-Excel esebenzisa ukusabalaliswa kwe-square.
Ngaphambi kokuba sibone oko i-Excel enokuyenza, masizikhumbuze ngokweenkcukacha ezithile malunga nokwabiwa kwe-square. Oku kunokwenzeka ukuba usasazo olunokungeniswa kunye noluncedo olukhulu. Iimilinganiselo zokusasazwa zihlala zingekho. Kukho ngokwenani inani elingenamkhawulo lokunikezelwa kwe-chi-square. Enye into esinomdla kuyo inqunywe inani leenkululeko inalo kwisicelo sethu. Inkulu kakhulu inani leenkululeko, ukusabalaliswa kwe-chi-square kuyo.
Ukunikezelwa kwe-chi-square kusetyenziswa kwizicelo ezininzi.
Uvavanyo lwe-Chi-square - Ukugqiba ukuba amanqanaba amabini ahlukeneyo ahlukeneyo ahlukeneyo.
Ubuhle bokuvavanya okufanelekileyo - Ukuchonga indlela yokujonga kakuhle ngayo imilinganiselo echaseneyo yoluhlu olulinganayo kunye nemilinganiselo ekulindelwe ngumzekelo wemfundiso.
Uvavanyo lweMultinomial - Lo usetyenziso oluthile lwe-chi-square test.
Zonke ezi zicelo zifuna ukuba sisebenzise ukuhanjiswa kwe-square. Iprojekthi iyimfuneko kubalo malunga nokuhambisa.
CHISQ.DIST ne-CHISQ.DIST.RT kwi-Excel
Kukho imisebenzi emininzi kwi-Excel esinokuyisebenzisa xa sisebenzisana nokunikezelwa kwe-square. Iyokuqala kwezi zi-CHISQ.DIST (). Lo msebenzi ubuyisela ubukhulu bekhohlo obunxwemeni obubonakalisiweyo. Ingxabano yokuqala yomsebenzi yixabiso elibalulekayo le-chi-square statistic. Ingxabano yesibini yinani lee- degrees zenkululeko . Ingxabano yesithathu isetyenziselwa ukufumana ukusabalalisa okuqokelelwayo.
Ngokumalunga kakhulu ne-CHISQ.DIST yi-CHISQ.DIST.RT (). Lo msebenzi ubuyisela ubuchule obuchanekileyo bokunikwa kwe-chi-square ekhethiweyo. Ingxabano yokuqala kukubaluleka kwexabiso le-chi-square, kwaye ingxoxo yesibini iyinani lee-degrees zenkululeko.
Umzekelo, ukungena = i-CHISQ.DIST (3, 4, eyinyaniso) kwiseli iya kukhupha 0.442175. Oku kuthetha ukuba ukunikezelwa kwe-chi-square kunye namadireji amane enkululeko, i-44.2175% yendawo engaphantsi kwekhalo ibheke ngakwesobunxele. 3. Ukungena = I-CHISQ.DIST.RT (3, 4) kwiseli iya kukhupha 0.557825. Oku kuthetha ukuba ukunikezelwa kwe-square-square kunye neesine degrees zenkululeko, 55.7825% yendawo phantsi kwekhalo libhekele ilungelo loku-3.
Naliphi na ixabiso leengxabano, i-CHISQ.DIST.RT (x, r) = 1 - CHISQ.DIST (x, r, yinyaniso). Oku kungenxa yokuba inxalenye yokusabalalisa engayithethi ukuya ngasekunene kwexabiso x kufuneka ilale ngasekunene.
Maxa wambi siqala ngendawo ethile yokunikezelwa kwe-chi-square. Sinqwenela ukwazi ukuba yeyiphi ixabiso le-statistic esiza kuyidinga ukuze le ndawo ibe ngakwesobunxele okanye ilungelo lokubala. Le yinkinga ye-chi-square eyahlukileyo kwaye iluncedo xa sifuna ukwazi ixabiso elibalulekileyo kwinqanaba elithile lokubaluleka. I-Excel isebenza ngale ndlela yeengxaki ngokusebenzisa umsebenzi we-chi-square.
Umsebenzi we-CHISQ.INV ubuyisela inqamleko yokunakekelwa kwe-tailed kwindlela yokuhanjiswa kweek-square kunye namazinga athile enkululeko. Impikiswano yokuqala yalo msebenzi yile nzekayo ngakwesobunxele bexabiso elingaziwa.
Ingxabano yesibini yinani lee-degrees zenkululeko.
Ngaloo ndlela, umzekelo: ukungena = i-CHISQ.INV (0.442175, 4) kwisisele iya kunika isiqhamo se-3. Qaphela indlela oku kuhambelana ngayo nokubala esikubukele ngaphambili malunga nomsebenzi we-CHISQ.DIST. Ngokubanzi, ukuba iP = CHISQ.DIST ( x , r ), ke x = CHISQ.INV ( P , r ).
Ngokumalunga kakhulu nalo msebenzi ngu-CHISQ.INV.RT. Oku kufana ne-CHISQ.INV, ngaphandle kokuba iqhubana neengxaki ezilungileyo. Lo msebenzi uncedo ngokukhethekileyo ekuqaliseni ixabiso elibalulekileyo kwisifundo se-chi-square. Konke okufuneka siyenze kukungena kwinqanaba lokubaluleka njengethuba lokunene lethu, kunye nenani leenqanaba lokukhulula.
Excel 2007 nangaphambili
Iinguqulelo zangaphambili ze-Excel zisebenzisa imisebenzi ehlukileyo ukusebenzisana ne-chi-square. Iinguqulelo zangaphambilini ze-Excel zazinomsebenzi wokubala ngokukhawuleza iziganeko zangasese ezilungileyo. Ngaloo ndlela i-CHIDIST iyahambelana ne-CHISQ entsha.DIST.RT, ngendlela efanayo, i-CHIINV ihambelana ne-CHI.INV.RT.